Fitondram-panjakana : Nankahery ny fianakavian’i Clarisse -
AccueilVaovao SamihafaFitondram-panjakana : Nankahery ny fianakavian’i Clarisse
Fitondram-panjakana : Nankahery ny fianakavian’i Clarisse
Mpanakanto nitondra avo ny kolontsaina malagasy. Tonga teto Antananarivo omaly ny nofo mangatsiakan’i Clarisse, mpihira sy mpamorona tao amin’ny tarika Ny Voanio, ary nandrasana tetsy amin’ny tranompokonolona Analakely. Omaly dia tonga namangy sy nankahery ny fianakavian’i Clarisse ny fitondram-panjakana malagasy tamin’ny alalan’ny minisiteran’ny Kolontsaina, ny fampiroboroboana ny asa tanana ary ny fiarovana ny vakoka, izay notarihin’ny sekretera Jeneraly. Mpanakanto nahavita be teo amin’ny sehatry ny kolontsaina izy, ary efa nomen’ny fitondram-panjakana ireo mari-boninahitra mendrika azy fony fahavelony.
Ankoatra ny minisitera dia tonga nitondra ny teny fampiononana ho an’ireo fianakaviana ihany koa ireo mpanakanto samihafa. Ireto farany izay nitondra fankaherezana sy nanala fahanginana ireo fianakaviana tamin’ny fanolorana hira sy fiantsana tononkalo sangan’asan’ireo mpanoratra andrarezina malagasy. Tao anatin’ny fihetsem-po tanteraka no nanaovan’izy ireo izany.
Anio folak’andro no hiainga etsy amin’ny tranompokonolona Analakely ny nofo mangatsiakan’i Clarisse, ary entina any amin’ny fasan-drazany any Sabotsy Namehana.